Canada Myanmar: January 2012
ABSDF မြောက်ပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးထားခြင်းခံထားရသောစပိုင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ABSDF ဥက္ကဌဒေါက်တာနိုင်အောင်၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ကျနော်ကချင်ဒေသကိုသွားရောက်ပြီးတစ်လအကြာမှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အစိုးရ အပေါ်ယခင်ကထက်ကိုပိုပြီး ခါးသီးစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်၊ ကျနော်အဖမ်းဆီးခံနေရသူများရဲ့ ပြောကြားထွက်ဆိုချက်အားလုံးကို သဘောထားရိုးစွာဖတ်ရှု့နားထောင်ခဲ့ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(NIB)ဟာ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အဖွဲ့(SLORC)ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးယန္တယားတစ်ခုဖြစ်နေယုံမျှမက ရှစ်လေးလုံးပြည်သူအုံကြွမှုကိုလည်း မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေအတွက်လည်းတာဝန်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့ဟာစနစ်ကျခိုင်မာတဲ့စီမံချက်နဲ့အတူ မိမိတို့အတိုက်အခံအင်အားစုတွေအတွင်းကို ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်ပြီး ညီညွတ်ရေးကိုဖြိုခွဲကာလက်ဦးမှုကိုရယူသွားရန်ဖြစ်တယ်၊ သူတွေဟာလူတွေကိုသတင်းပေးသမား၊ထောက်လှမ်းသမားများအဖြစ်အသုံးချပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်၊ သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ကတော့ ထင်ရှားတဲ့ခေါင်း ဆောင်များနဲ့အတိုက်အခံအင်အားစုတွေကိုပဲဖြစ်တယ်၊ ABSDF ဟာစပိုင်တွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူ ဟာပြစ်မှတ်တစ်ခဲ့ဖြစ်ပြီး”Water Wave”ရေလှိုင်းစစ်ဆင်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်ကထိုးဖေါက် ၀င်ရောက်နိုင်ရေးပင်ဖြစ်တယ်၊ သူတို့အဓိကလုပ်ဆောင်ရမဲ့အပိုင်းတွေက ၁၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရေး ၂၊ အဆင့်မြင့်ရာထူးနေရာတွေကိုရယူထားရှိရေး ၃၊ မဟာမိတ်အဖွဲ့များနဲ့ထောက်ခံအားပေးသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နားလည်မှုလွှဲမှားရေး ၄၊ ခိုင်မာတဲ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးတို့ပင်ဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရမဲ့အချိန်ကတော့ အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပမည့်အချိန်ဖြစ် သည့် ၁၉၉၂နှစ်ကုန်ပိုင်းပင်ဖြစ်သည်၊ တစ်ချို့အုပ်စုတွေကတော့အမျိုးသားညီလာခံမကျင်းပ ခင်အလင်းဝင်ကြရန်ဖြစ်ပြီး ကျန်နေမဲ့အုပ်စုတွေကိုတော့ဖိအားတွေကိုအပြင်းအထန်ပေးပြီး အမျိုးသားညီလာခံအပြီးတွင်ဖြစ်လာမည့် အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသည့်အချိန် တွင်အလင်းဝင်ကြရန်ပင်ဖြစ်သည်၊ (ဒီစပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့၁၉၉၂နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ကျင်းပမည့် အမျိုးသားညီလာခံ အကြောင်းကိုမူလကပင်သိရှိထားပြီးသားဖြစ်သည်)နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည့် အုပ်စုတွေကတော့ ပြင်းထန်တဲ့စစ်ဆင်ရေးနဲ့အတူချေမှုန်းခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်၊ ကျနော်အနေနဲ့ မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးသေဒဏ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီစပိုင်(၁၅)ဦးအတွက် လုံးဝ အငြင်းပွါးစရာမရှိပါ၊ သို့သော်လည်းပဲကျနော်အနေဖြင့် ဗဟိုကော်မီတီဟာ ယခုဆုံးဖြတ်ချက် တွေမှာလုံးဝပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိ်သော်လည်း တာဝန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာလူထုလူတန်းစားတွေကိုကျနော်တို့ရှင်းပြချင်တာကတော့ ကျနော်တို့နောက်ထပ် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့စပိုင်တွေကို အပြုသဘောဆောင်စွာဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ၊ မကြာသေးခင်ကပဲ ကျနော်မဟာမိတ်အင်အားစုကခေါင်းဆောင်တွေ ABSDF မြောက်ပိုင်းက ကော်မီတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်လုပ်ဆောင် ဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ၁၊ ABSDF ကနေပြီးတော့ နောက်ထပ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့စပိုင်တွေကို သေဒဏ်မပေးရေး ၂၊ မိမိတို့တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုဆီသို့ရပ်တည်ချက်မှန်မှန်ပြောင်းလဲလာသူတွေအားလုံးကို သာမန်အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ပြန်လည်လက်ခံသွားရန်၊ ၃၊ ကျနော်အနေဖြင့်လုံးဝလက်မခံနိုင်သောစပိုင့်များကိုမူ ၄င်းတို့၏အနာဂတ်လုံခြုံရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်၊ ABSDF ကလည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရများထံ ၄င်းတို့အားမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရရှိသည်အထိလက်ခံသွားပါရန် မေတ္တာရပ်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်၊ ၄၊ အကယ်၍သူတို့ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလက်ခံထားရှိပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့လျှင်၊ သူတို့ကိုထောင် ဒဏ်တစ်နှစ်စီချမှတ်ပြီး မိဘဆွေမျိုးတို့၏ခံဝန်ချက်ဖြင့်ပြန်လွှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်သည်၊ ၅၊ သူတို့တစ်တွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ခဲ့သော်လည်းပဲ သူတို့ဟာအာဏာရှစ်စနစ် ရဲ့သားကောင်တွေအဖြစ်လက်ခံထားပါတယ်၊ ဒါဟာကျနော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွါးနဲ့လူအ ခွင့်အရေးကိုစာနာထောက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးရင်ကျနော်တို့မှသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စပိုင့် မှတ်တန်းအထောက်အထားအသေးစိတ်တွေကိုလူသိရှင်ကြားဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ် ၆၊ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပန်ကြားလိုသည်မှာ စပိုင်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျနော်တို့ကိုနားလည်စွာဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေးသွားကြ ပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်၊ တည်ကြည်စွာဖြင့် လက်မှတ် မေလ(၃၁)ရက်နေ့၊ ၁၉၉၂ခုနှစ် ဒေါက်တာနိုင်အောင် ဥက္ကဌ ဗဟိုကော်မီတီ ABSDF Press Release by the Chairman of ABSDF Concerning with the spies of those arrested in Northern ABSDF After visiting to Kachin State foramonth, I have suffered bitterness of brutality of dictatorial regime more than before. I read the sincerely statement and listen the testimony of those detained in Northern State. Especially, National Intelligence Bureau of Burma, the main oppressed machinery of SLORC, is the main responsible for the turmoil and anarchist elements of 8888 uprising. They have well concrete planning to seek the confusing and disunity among the opposition to get upper hand. They use the people as the informers and intelligence by inserting various means and pressure. The main target are prominent leaders and main opposition group. ___of their strategy, the ABSDF become main target to be infiltrated, those spies are send under operation named “Water wave”. Their section are: -To create instability within the organizations. -To control the higher posts. -To make misunderstanding with the allied organizations and supporting group. -To have depression to surrender, and -To assassinate their strong opponents. The deadline for the target is the end of 1992, which will be time convening the National Convention. Some groups have to surrender before National Convention and they push hard remaining group to surrender at General Amnesty which will be held in the aftermath of National convention. (The spies group leaders have already known the fact that the National convention will be convene at the end1992.) The remaining group after amnesty will be crashed down by intensive military offensive. I have no more dispute about the righteousness to execute 15 spies. However, I myself, on behalf of the central committee, have the responsibilities for that even though there was no participation by central committee on decision process. We would like to explain to international community that we must have more intention to solve the future of remaining arrested spies in constructive ways. Recently, I have discussed with the northern committee of ABSDF and leaders from Kachin Independence Organization (KIO) and decided the following resolution. ABSDF is not to give death penalty to those remaining spies. Those who the attitude and stance toward our movement are to be accept as ordinary member. For the spies whom cannot be accepted by us will be transferred to the international organization for their safe and future. For that ABSDF has to appeal to the international organization and democratic governments to accept those spies until Burma has democratic change. If there is neither place nor condition to accept those spies outside Burma, they will be released after one year detainment with guarantee of their parents or relatives. Even we have the attitude to behave them as enemies; we accept those person are victims of brutal dictatorial system. This is why we are looking forward for the long term benefits and humanitarian concepts. And we continue to elicit the detail documents and statement of the spies soon. Therefore, we would like to appeal to the international organizations governments to find the way for the future of those spies and give us cooperation based on understanding toward us. With best regards, Signed 31st May, 1992 Dr Naing Aung Chairman Central committee ABSDF
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:48 p.m. No comments: Links to this post
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးနိုင် ABSDF တောင်ပိုင်း မှာ သူလျှို ဟု လုပ်ကြံစွပ်စွဲ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ ရပုံ
ကျောင်းသား ကိုဌေးနိုင် ABSDF တောင်ပိုင်း မှာ သူလျှို ဟု လုပ်ကြံစွပ်စွဲ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ ရပုံ From: sukmai82@hotmail.com To: kyawthushein@msn.com Subject: ဌေးနိုင် တောင်ပိုင်း အေဘီ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ အသတ်ခံမှု စဖော်ပြီ။ Date: Fri, 27 Jan 2012 21:26:36 +0100 ကိုထင်ကျော်ထက် ကျွန်တော် စုံစမ်းသိရှိသမျှကို တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများသို့ ပေးပို့ ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ပြန်လည်တင်ပြသူရေးထားတာတွေ အားလုံးမှန်ကန်ပါတယ် ။ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားလူငယ်များ သမိုင်းအမှန်သိပြီး အမှားရှောင်ရန် တင်ပြသည့်အတွက် ကောင်းပါတယ် ။ တော်လှန်ရေး အဓွန့် ရှည်ပါစေ အဖွဲ့ တွေအတွက် သိကြားမင်းရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါစေဗျာ ။ ကိုဌေးနိူင်ကို ၁၉၆၂ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကိုဌေးတင့်ကို ၁၉၆၀ တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည် ။ http://hittai.net/?show=rm&fileid=115&t=home9&id=9 ဌေးတင့် (နယ်သာလန်)ညီ ဌေးနိုင် တောင်ပိုင်း အေဘီ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ အသတ်ခံမှု စဖော်ပြီ။ ကိုတင်ဝင်းစိုး -၂၇.၁.၂၀၁၂ ဟစ်တိုင်အယ်ဒီတာခင်ဗျာ နယ်သာလန်မှာနေနေတဲ့ ကိုဌေးတင့်က သူ့အကို(ကိုဌေးနိုင်) အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ထားတဲ့ ဟုမ်းပေ့ခ်ျတခုကို တွေ့ရပါတယ်။ အမှန်တရားဖေါ်ထုတ်ကြရာမှာ (ကိုသန်းဝင်း ရေးထား တာရော)ကိုဌေးတင့်က ဖေါ်ပြထားပါတယ်၊ သေတဲ့လူတွေလဲ သေကြပြီဆိုပေမဲ့ ဒီလူတွေအတွက် အမှန်တရားသမိုင်းမှတ်တိုင်လေးကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်း တင်ထားဖို့လိုသလို နောက်လူငယ်တွေလဲ ဆင်ချင်တုံတရား အသိတရားကင်းမဲ့စွာ အမှားများမလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် သမိုင်းသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ ကိုဌေးတင့်ရေးထားတာကို ဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ကိုတင်ဝင်းစိုး ။။။။။။။။။။။။။။။။ နောက်ဆုံး ရတဲ့ သတင်းမှန် ၂၀၁၁ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်နေ့ က မမျှော်လင့်ဘဲ Utrecht ကိုသွားရင်း ကိုထွန်းထွန်းဦး နဲ့ တွေ့ ခဲ့ပါတယ် ။ မတွေ့ တာ ၅ နှစ်ကျော်ဆိုတော့ အလာပ သလာပတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အိမ်ရှင် ကဟင်းပေါင်းစုံ ကို အရသာရှိရှိ ချက်ကျွေးသောကြောင့် ကိုထွန်းထွန်းဦး ဝိုင် နှင့် အမြည်းကို တဝ သောက်ခဲ့ပါသည် ။ မင်းတို့ ထက် ငါပိုသိတယ် ။ ငါက မျက်စိရှေ မှာ မြင်နေ၇တာတဲ့ အရက်မူးကျွဲခိုးပေါ် ဆိုသည့် စကားအတိုင်း အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဟောင်းတဦးမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ မြိုသိပ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က လူသတ်မှု ၂ ခုပေါ်လာပါသည် ။ ကိုထွန်းထွန်းဦး ပြောပြသည်မှာ ရန်သူ့ လူ တယောက်မိသည်ဟု သတင်းကြားပြီး သွားကြည့်ရာ ကိုဌေးနိုင်ကို အံ့သြစွာစွာ ဖြင့် မြင်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော် လေးစားသော ကျောင်းသားတပ်မတော် ဦးစီးချုပ် ။ ဗဟိုမှ လက်မှတ်ထိုး ဖမ်းမိန့် ပေးထားသည့် စာမှာ သိမ်းခဲ့သော်လည်း ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည် ။ ဆီဝေရင် ကျွန်တော့ကို ချာတိတ်ဟခေါ်ကာ ပိုပေးတတ်ပါသည့် ကျွန်တော်က ဂျီတီအိုင်က ကျောင်းသားပါ ။ ကျွန်တောက အဲဒီတုံးက လူငယ်တယောက်ပါ ။ ကိုဌေးနိုင်ကို အထက်အရာရှိ အဖြစ်လေးစားပြီး အကိုတယောက်ကဲ့သို့သံယောဇဉ် ရှိပါတယ် ။ ကိုဌေးနိူင်ကို ဖမ်းထားစဉ် အကို ဖြစ်သူ ဘန်ကောက်မှာ ရှိသည်ဟု အကြောင်းကြားလာပါသည် ။ လှဝင်း ဆိုသော ချာတိတ်ဖြစ်ပါသည် ။ မမြင်ဖူးတော့ မယုံပါဖူး။ အခု ခင်ဗျားနဲ့မနီလွိုင်မှာတွေ့ မှ မြင်ဖူးတာကိုး ။ မိုးသီးက လက်နက်တွေကို ပဲခူးရိုးမထဲရှိ ကွန်မြူနစ်တို့ ထံပို့ ခိုင်းပါသည် ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရဲဘော်အချို့ ကို ခေါ်ပြီး သေနပ် အလက် ၂၅ လက်ပစ်ဗုံးများ မယ်နယ်ပလော မှ လှေဆိပ်သို့ထမ်းချပေးခဲ့ရပါတယ် ။ ကေအန်ယူမှ သိရှိသွားပြီး ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဖမ်းခံရပါသည် ။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်မှ သတင်းရပြီး နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်များ ခေါ်လာပြီး ကေအန်ယူလက်ထဲမှ ထုတ်ပါသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်မြ မှ မင်းတို့ကရင်နယ်မြေမှ ထွက်ရန် အမိန့် ပေးလာပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဗဟို အဖွဲ့မယ်နယ်ပလောမှ ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်ပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့စက်လှေကို ပြင်ဆင်ပြီး တော့ အချုပ်ခန်းထဲမှ ဒီကောင်ကြီးကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲဟုတိုင်ပင်ကြပါသည်။ နိုင်အောင်လဲ ရှိတယ်။ လွမ်းဏီ၊ ဘစောထွန်း တို့ လည်းရှိနေပါသည် ။ ကျွန်တော်က ပစ္စတို ၂ လက် ခါးကြားမှာ ဆိုတော့ အကောင်ပေါ့။ ကျွန်တော့ ကို အမိန့် ပေးလို့ မရပါဖူး။ ကရင်နီကို တပ်ပြောင်းရာမှ ဒီ ၂ ကောင်က အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ထားခဲ့ ရန် အားလုံးက သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ က ပညာတတ်ကျောင်းသားတွေပါ ကိုယ်တိုင် သတ်ရန်မလိုပါဖူး။ ကိုဌေးနိုင်ကို ဆေးထိုးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ခန္တကိုယ်ကြီး ၅ မိနစ်မခံပါဖူး ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆေးပါ ။ ကျန်တယောက်ကိုတော့ ပစ္စတိုနဲ့ခေါင်းကို ကျွန်တော်တို့ ထဲမှ တယောက်က သေနပ်စမ်းလိုက်ပါတယ် ။ တချက်တည်းပါဘဲ။ မှတ်မှတိရရ သူ့ နာမည်က လှဝင်းတဲ့ ။ ကျွန်တော်တို့ လည်း အဖမ်းခံ ထားရပြီး လွတ်လာခါစဆိုတော့ ညစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ ဆောရီးဘဲ ကိုဌေးတင့်။- ကျွန်တော် အမှန်တကယ် စိတ်မကောင်းပါဖူး။ မှတ်မှတ် ရရ ၁၉၉၃ မတ်လ ၂၂ နဲ့ ၂၇ ကြားပါ သတ်ပြီးချိန်မှာ ကရင်က လာမေးတော့ သယ်သွားမယ်ဟု ပြောပြီး လှေထဲမှာ စောင် အုပ်ပြီး အဲဒါ ဌေးနိူင်ဟု လက်ညိုးထိုးပြခဲ့ပါသည်။ ဌေးနိုင်နဲ့လှဝင်းအလောင်းကို ပုဆိုးစုတ်ကလေး အုပ်ပြီး ချုံပုတ်ဘေးမှာ ပစ်ထားခဲ့ပါသည် ။ ရဲဘော်တယောက်မှ လှေထွက်ခါနီး အလောင်းထားခဲ့တယ်လို့ကရင်တပ်ကို ပြောခဲ့ပါတယ် ။ မတတ်နိုင်ဖူးဗျာ တာဝန်ကြေအောင် လုပ်ပေးရတာဘဲ ။ နိုင်အောင်က မိုးသီးလောက် နိုင်ငံရေး မကောင်းဖူး သူတို့၂ ယောက်က အတူတူပါဘဲလေ ။ ( ရဲဘောရဲဖက်များ ကို ကျွန်တော ရသည့် သတင်းကို ပေးပို့ ပါသည်။ အမှန်တရား တခုကို ပူးပေါင်းပိတ်ဆို့ လို့ မ၇နိုင်ပါ ။ ကျွန်တော့် ဆီမှာ အသံသွင်းဖိုင်ရှိသော်လည်း အချိန်မကြသေးလို့ မဖြန့် တော့ပါ ။ ကိုဌေးနိူင် သေဆုံးချိန်မှာ အတူတူရှိသော့ လူခြောက်ယောက် ယောက်စာရင်း ထွက်လာပါသည် ။ ကိုဌေးနိုင်ကို သတ်မိန့် ပေးတဲ့ အဖွဲ့ ကတော့ မိုးသီး ဒေါက်တာနိုင်အောင် ၊ဘစောထွန်း ၊လွမ်းဏီ၊ ဇော်ရဲ ထွန်းထွန်းဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဌေးနိုင်ကို ဖမ်းရန် အမိန့် ထုတ်ခဲ့ လက်မှတ်ထိုးသူမှာ မိုးသီး ဖြစ်ပါသည် ) ကနေဒါမှ ကျောင်းသား ရဲဘော် ရဲဘက်များက ကိုဌေးနိုင်နှင့် ပါတ်သက် တခုခုလုပ်နိုင်ရန် တိုင်ပင်နေသည်ဟု ကို နိုင်ဦးမှ ပြောလာပါသဖြင့် သိရှိစေရန် တင်ပြပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့လူငယ်တိုင်းကို တာဝန်ပေးဖို့ စဉ်းစားရန်လိုသည်ကို ညီတယောက် ပေးလိုက်ရသည့် သမိုင်းမှန်ဖြင့် ထောက်ခံလိုက်ပါသည် ။ ဌေးတင့် (နယ်သာလန်) သန်းဝင်းရေးတဲ့ အထောက်အထားစာ။။ အပြည့်အစုံ ဖတ်လိုပါက--- http://htaytintnl.blogspot.com/2010/04/blog-post_658.html http://www.88daun88.blogspot.com/ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ တချိန်က ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့ မိသားစုရဲ့ ဌေးနိုင် မျှော်လင့်ချက် ကို ခံစားနိုင်ပါရန် ပူးတွဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ညီပျောက်ရှာပုံတော် သို . ၈၈ က မိတ်ဆွေများ နိုင်ငံတကာကို ရောက်ပြီး ဘ၀သစ်ရပ်တည်မှုတွေ အတွက် ကြိုးစားကြရင်း မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ပညာတွေဗဟုသုတ ကို တည်ဆောက်ရင်း အချိန်ပေးပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြတာ ဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးပါတယ်၊ သြော် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေ မှ မဟုတ်တော.ပါလား။ စစ်တပ်ကတော့ တပ်တွင်းနဲ့ အရပ် အုပ်ချုပ်ရေး ၀န်ထမ်း အုပ်စုလိုက် မှားခဲ့တာတွေ ကိုအမြင့်ဆုံးထောင်ချပြီး လိုအပ်သလောက် အချိန်တွေယူပြီး အမြဲတန်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းစဉ် ဖွဲ့ စည်းပုံကို ၂၀၁၀ ကစပြီး အကောင်အထည် ဖေါ်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်ထဲက အမေတယောက် မေးလာပါသည်။ အမေ့သားငယ်ကို တွေ့ မိလားတဲ့၊ ဘာသတင်းမှမရတာ နှစ် ၂၀ ကျော်ဆိုတော့ ဆုံးပြီထင်ပါရဲ့၁၉၈၈ အဲဒီရက်ညနေခင်းကပေါ့။ (၂၀-၈-၈၈)သားကြီး အစည်းအဝေးကအပြန် သားကြီးက မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိဘို့ပြည်တွင်းကလှုပ်ရှားလို့ မရတော့ဘူး နယ်စပ်က ဆက်လုပ်မယ်တဲ့။ နောက်ဆုံးနှစ်သချာ်ဗေဒ ဘော်လီဘောလက်ရွေးစင်ကျောင်းသား သားငယ်လေးက ကိုကြီး နဲ့ နယ်စပ်ကို ကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးသွားကုန်ကြပြီ။ ကိုကြီးအတွက်ပိုလုံခြုံတာပေါ့တဲ့။ သူ့ နာမည်က ကိုဌေးနိူင်တဲ့ သူဘယ်မှာလဲ ။သူဆုံးပြီလား။ ဘာကြောင့်လဲ။ သူ့ အလောင်းကိုဘယ်မှာ ထားခဲ့လဲ။သူက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဆွမ်းသွပ်ပြီးလား၊ သူနဲ့ ဘယ်သူတွေနေခဲ့ဘူးလဲ။ ပြောကြပါ။ ဓါတ်ပုံလေးများရှိရင်ပို့ ပေးကြပါ။ သူ့ သားငယ် ယူလာမဲ့ တစုံတခုကိုမျှော်လင့်နေတဲ့ ပါးရည်နားရည်တွေ တွန့် လိမ်နေပြီး ခါးကုန်းစပြုနေတဲ့ ကိုဌေးနိူင်ရဲ့ အမေက မြန်မာပြည် ပြောင်းလဲ မှုတခုတိုင်းမှာ သူ့ သား နဲ့ ၈၈ က သူငယ်ချင်းတွေကို တမ်းတမ်းတတအမြဲမေးနေတယ် မျှော်လင့်နေဆဲ မီးစာကုန်တော့မဲ့ အမေအရွယ် အဖွားအိုကို ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။ ဒီလိပ်စာနဲ့ ပြန်ပို့ ပါ ကို ဘာများပြောချင်ပါသလဲ ဒီလိပ်စာနဲ့ ပြန်ပို့ ပါ ကိုဌေးနိူင်ရဲ့ မောင်နှမများ (ကိုဌေးနိူင်မှာ ဒုတိယသားဖြစ်ပြီး ညီ၂ ယောက် ညီမ၂ ယောက်၊အကိုတယောက်လက်ရှိ ၂၀၁၀ အထိ အသက်ရှင်နေဆဲပါ) ဌေးတင့် (နယ်သာလန်) Met vriendelijke groet Dhr Htay Tint
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:04 p.m. No comments: Links to this post
ရိုးမ တဆ္ဆေ ခြောက်လှန့်လေပြီ အို အေဘီ
Absdf ( North )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 5:12 p.m. No comments: Links to this post
A.B.S.D.F မှာ အမှန်တရား တွေ ဟာ ဘာ့ ကြောင့် တိမ်မြုပ် ပြောက်ကွယ်နေရတာပါလဲ အမှန်တရားဆိုတာတွေကို လူတွေကသိပေမဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါမပေးသေးတာတို့ အမှားဖက်က ရပ်တည်သောသူ တွေ များပြားနေတာတို့ အမှန် သိလျှက်နှင့် မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် နုပ်မဟ ပဲငြိမ်နေသူ များဟာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာမှာရှိနေ ရာမှာရှိနေတာတို့ စတာတွေကြောင့် အမှာတွေဟာ ပိုမိုကြီးထွားလာတာမျိုး မဖြစ်သင့် ပဲဖြစ်သွားကြရတာမျိုး ( တားဆီးနိုင်သော သူနည်းပါးနေခြင်း )ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာမြန်မာစစ်အစိုးရလိုမျိုးကြီးထွားတဲ့ အုပ်စုမျိုးမှအစတိုင်းရင်းသား လက်နှက်ကိုင်တွေအလည် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရစ်တစ်တပ်ဦး အဆုံး တချိန် တခါမှာဖြစ်တပ်ကြ ပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့ ကြတာတွေဟာ ပြန်လည်ကောက်ယူလို့ မရတော့ ပေမဲ့ အဲဒီအမှားတွေကို ပြုပြင်ခြင်စိတ်မရှိတာ ၊ ဖုန်းအုပ်ထား ချင်တာ ၊ အသိမသာ ကာကွယ်ပေးထားချင်တာ ၊ ဖေါ်ထုပ်လိုသောသူတွေကို တဖက်လှည်နည်းနှင့် တားဆီးချင်တာအချိန်ဆွဲ ချင်တာတွေဟာ လုံးဝဖေါ်ထုပ်လိုခြင်းမရှိတာတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာနာမူ တရား အမှန်တရားအတွင်းစိတ်မရိုးသားမူတွေကိုဖေါ် ပြ ရာရောက်ပါတယ်။ ကိုဖုန်းမော်၊ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးတို့ မှအစထောင်ထဲမှာကျဆုံးသွားခဲ့ ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်အားလုံးကိုမှတ်တမ်း တင်ဂုဏ်ပြုကြမယ်ဆိုရင် တောထဲ မှာကျဆုံးသွားတဲ့ကိုထွန်းအောင်ကျော် အုပ်စု ၊ ကိုလွမ်းမိုးတို့ မှအစ ကို ဌေးနိုင်တို့ အလည် ဖမ်းဆီးနိပ်စက်ခံခဲ့ ကြရတဲ့ ကိုနေ၀င်းအောင် မနန်းအောင်ထွေးကြည်တို့ နှင့် အခြားသော သူများစွာကို ထုတ်ဖေါ်မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုသင့် တာကိုဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး ။ မိမိ ကိုယ်ကျိုး အတ္တအကျိုး ပုဂ္စိုလ်အစွဲတွေကြောင့် ဒါတွေကိုရေငုံနုပ်ပိတ်ထားချင်တယ် ။ အချိန်ဆွဲထားခြင်တယ်ဆို တာမျိုးတွေမဖြစ်သင့် ကြပါဘူး၊ မဆိုင်သူတွေဝင်မတားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် အချို့ ဟာသာတဲ့ ဖက်ကိုယိမ်း အထက်ဖါးအောက် ဖိမိမိအချင်းချင်းချကြွေးပြီးကိုယ်နေရာဝင်ယူ၊ကျေးဇူးတရားမသိတပ်ပဲအချင်းချင်းမထောက်ထားတော့ ပဲ မျက်နှာပြောင်သွေးသပ် ပြီးကိုယ်လူသူ့ ဖက်သားလုပ်ကာ မှားမှန်း မတရားတော့ မှန်းသိနေပေမဲ့ ရေငုံနုပ်ပိတ်လက်ပိုက်ကြည့် နေတပ်တာတွေအတွက် ရဲ ရင့် စွာရပ်တည်ရဲ ဖို့ အချိန် ကျရောက်ပါပြီဆို တာ သတိပေးလိုပါတယ် ။ အတ္တကိုယ်ကျိုးအတွက်မှားတဲ့ ဖက်ကို မသိမသာ လိုက်ရဲ တဲ့ ၊အားသာသူဖက်ကဖါးတပ်တဲ့ အကျင့် တွေ ပြောင်းလွဲသင့် ပါပြီ၊ လူတွေအားလုံးဟာ မပြောပေမဲ့ ကြည့် နေကြတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်နောင်မှာ ဖါးတပ်သူ စာရင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်သွားနိုင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားဖေါ် ထုတ်ရေး အတွက် သေသွားသူတွေကိုယ်စား ၄င်းတို့ မိသားစုကိုယ်စား ရဲရဲ ရပ်တည်နိုင် ကြပါစေ ။ စိုင်း ကျော် ဦး ( ၈၈၈၈ မှ ဆောင်းပါးကို ကူးယူ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:03 p.m. No comments: Links to this post
A.B.S.D.F မှာ အမှန်တရား တွေ ဟာ ဘာ့ ကြောင့် တိမ်မြု...
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးနိုင် ABSDF တောင်ပိုင...